Madaxweyne Xasan “Madaxweyne adiga iyo wafdiga kula socda markale ku soo dhawaada Soomaaliya” DAAWO – Radio Muqdisho
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Recep Tayyip Erdoğan ayaa si wadajir ah xariga uga jaray Terminal-ka cusub ee ay dowladda Turkiga ka hirgelisay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo loo dhisay si carsi ah.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa tilmaamay in ay farxad u tahay booqashada markiisa labaad uu ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana uu intaa ku daray in uu indhihiisa ku arkay horumar balaaran oo ay dowladdu ku talaabsatay.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idinkala qeyb galo furitaanka Terminal-kan cusub, waxaana rajeyneynayaa in Terminal-kan uu ku soo kordhiyo Soomaaliya wax badan”ayu yiri Recep Tayyip Erdoğan
Madaxweynaha Turkiga ayaa uga mahadceliyay shirkadda dhistay Terminalka cusub.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa Turkiga uga mahadceliyay booqashada isaga iyo wafdiga la socda ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho, waxaana Madaxweynuhu xusay in shacabka Soomaaliyeed ay abaal u hayaan shacabka iyo dowladda Turkiga oo gurmad dhinac waliba leh u fidiyay.
Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray “Terminal-ka waxa uu wax ka badalay muuqaalka Soomaaliya, tan kale mashaariic kale ee aad dalka ka hirgeliseen muuqaal cusub ayay Soomaaliya ka abuurtay, markale ku soo dhawaada adiga iyo Wafdiga kula socda Soomaaliya”
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo booqashada Madaxweynaha Turkiga ku tilmaamay mid taariihi u ah shacabka